FAO Inoti Goho remuZimbabwe Riri Kuramba Rakaderera neKushaya Mari kweVarimi
Bandiko reUnited Nations rinoona nezvechikafu nemabasa ekurima, reFood and Agricultural Organisation kana kuti FAO rinoti goho muZimbabwe riri kuramba riripasi kunyange hazvo hurumende iri kuedza kutsigira mabasa ekurima.
Vachitaura pamusangano wezvekurima nemabhizimisi kuHarare Agricultural Show muHarare nemusi weChitatu mumiriri weFAO muZimbabwe, VaPatrick Kormawa, vakati goho rezvirimwa nezvipfuyo munyika riripasi chose kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakaita seZambia neSouth Africa.
Vakatiwo mabasa ekurima ari kudzikira munyika kubva muna 1985 kusvika muna 2014 uye ange ari kukwira mune dzimwe nyika dzemudunhu.
VaKormawa vakakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise matambudziko anosangana nevarimi munyika akaita sekushaya mari yekutenga zvavanoda pabasa ravo, kushaya mari yezvikwereti nenyaya yekuti vanokwanisa kubviswa panguva ipi zvayo paminda yavo pamwe nekushaya misika nemitengo yakanaka.
Vachivhura musangamo uyu zviri pamutemo, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika muhurumende, VaConstantine Chiwenga, vati kunyange hazvo hurumende iri kuedza napose painogona napo kubatsira varimi, mari yekuvabatsira haisikukwana uye vakakurudzira mabhanga nemakambani akazvimirira kutsigira varimi pamabasa avo.
VaChiwenga vakatiwo varimi vanenge vapihwa zvikwereti zvekurima vanofanira kuzvibhadhara vachiti kurima kunofanira kutorwa sebhizimisi.
VaChiwenga vakati vanobvumirana nemaonero eFAO vachiti hurumende inoda kuona kuti varimi vabatsirwa nezvikwereti uye vese vanoda minda vapihwa kuti vatsigire hupfumi hwenyika nekurima.
Vakati nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, hurumende yavo ichavandudza mabasa ekudiridzira kuti nyika isaite nzara.
Vakakurudzirawo vagari vekumumaruwa kuti vanyorese kuti vawane rubatsiro rwembeu nefotereza pasi pechirongwa chemutungamiriri wenyika chekuwanisa vanhu zvikwanisiro chePresidential Input Scheme.
Vakatiwo chirongwa cheCommand Agriculture icho chakaparurwa muna 2016 chiri kubudirira zvikuru zvekuti nyika haichatenga chibage kunze sezvo ine chibage chakakwana.
Asi gwaro idzv re sangano remuAmerica rinoona nezvemamiriro ekunze, zvekudya nekurima reFewsnet rinoti vanhu vakawanda muZimbabwe vakatarisa nenzara inotyisa sezvo zvekudya zvoshomeka.
Mutungamiriri wesangano revarimi, reZimbabwe Commercial Farmers Union, VaWonder Chabikwa vakatiwo vanobvumirana neFAO kuti varimi vanofanira kutsigirwa zvakasimba nehurumende.
Vakatiwo madhumeni anofanira kupihwa zvikwanisiro kuti akwanise kufamba mumatunhu ese achidzidzisa varimi pamwe nekuita kuti vari kuita basa ravo nemazvo here.
Nyanzvi dzemamiriro ekunze dzinoti Zimbabwe yakatarisana nenzara sezvo ichawana mvura shoma mumwaka unotevera. Asi VaChabikwa vanoti vakagadzirira uye vave kutoudza nhengo dzesangano ravo kuti dzirime zvirimwa zvisingadi mvura yakawanda.
Varimi vari kusangana kuHarare Agricultural Show vachidzidzisana pamwe nekuzeya nzira dzekuvandudza nekusimudzira mabasa ekurima munyika.